Iyo saga yeakareba-akararama naEva García Sáenz, zano risingatarisirwe | Zvazvino Zvinyorwa
Saga rekare akateedzana aine nhoroondo yezvinhu zvakaburitswa muzvikamu zviviri mhuri yekare (2012) uye Vanakomana vaAdamu (2014). Chinyorwa chekutanga chakaratidza chakabudirira kwazvo kunyorwa kwekutanga kwemunyori wechiSpanish Eva García Sáenz, akarondedzerwa nevanoongorora sechiitiko chikuru chekuburitsa chakatanga mumadhijitari enhau.
Saga rinotanga nekuunzwa kwemunhu mukuru, Iago del Castillo ane makore zviuru mazana matatu nemazana matatu. Anotanga pamwe nyeredzi (Adriana Alameda) kuongororwa kwakaomarara kunotsvaga kugadzirisa hutachiona hwevadiki vekusingaperi vehupenyu hwakareba. Chikamu chechipiri chinopa shanduko yakadzika yevatambi vari pakati pejaho yakanangana nenguva iyo inosiya diki diki muchikamu chechitatu. Muchidimbu, bhuku raunofanira kuverenga usati wafa.
2 Plot, ongororo uye mavara eSaga revakagara-mhuri: yekare mhuri
2.1 Kuchinja kwevechidiki kusingaperi
2.2 Iago del Castillo uye kutsvaga kwemhinduro
2.3 James weCastle
2.4 Kyra of the Castle
2.6 Lür, "tateguru"
3 Kuongorora uye tsananguro yeVanakomana vaAdamu
4 Pachave nechikamu chechitatu cheiyo Saga yeiyo Yakagara-Kurarama?
Eva García Sáenz akaberekwa muna 1972 muVitoria, ,lava. Iye ane degree mu optics uye optometry, akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeAlicante, basa raaiita asati azvitsaurira zvizere kumabhuku. Chinyorwa chekutanga che Iyo saga yeakagara-ararama: iyo yekare mhuri (2012) yakagadzirwa kuburikidza newebhu webhusaiti Amazon.com, mushure mekusaita kuti vaparidzi vafarire basa rake.
Kubva ipapo zvichienda mberi, García Sáenz akatora mukana wekugamuchirwa kwakanaka kwebhuku rake rekutanga kusimudzira kuburitswa kwake kunotevera: Vanakomana vaAdamu y Passage kuenda kuTahiti, ese kubva 2014. Munguva ye2016 chikamu chekutanga cheaakarumbidzwa White Guta Trilogy, Kunyarara kweguta jena, akaenderera mberi Iyo mvura inogadzirira (2017) uye Iwo madzishe enguva (2018).
Iye munyori anokwanisa kugadzira rake rairo re nhema nhema, kwaanoongorora miganho pakati pezvinogoneka uye ngano nenzira inotandadza. Pamusoro pezvo, García Sáenz aratidzira kugona kukuru kwekugona uye kwekugadzirira panguva yekujekesa imwe yenhoroondo dzake, nekuda kweichi chikonzero, akakwanisa kuzvinyudza munyika yezvekuchera matongo kana mumapurisa ezvinyorwa nenzira yakatendeka uye yakakwana.
Plot, ongororo uye mavara eSaga revakagara-mhuri: yekare mhuri
Kuchinja kwevechidiki kusingaperi
Iri bhuku rinotarisa huvepo hwemhuri yevanhu vasina zera rinopfuura makumi matatu emakore nekuda kwekusazivikanwa kwemajini. Ava havasi vanhu vengano kana vasingafi. Muchokwadi, kwakatangira mamiriro aya inhaka. Nekudaro, nei yanga ichitepfenyurwa zvisingawanzo munhoroondo inoramba yakavanzwa.
Iago del Castillo uye kutsvaga kwemhinduro
Saka, Iago del Castillo anosarudza kutsvaga mhinduro, achityairwa nehama dzake Jaime del Castillo naKyra del Castillo. Akazvarwa pamhenderekedzo yeCantabrian makore gumi nemazana matatu nemazana apfuura, Iago (pachokwadi, zita rake ndiUrko) murume anotaridzika anotaridzika akazadzwa neruzivo, anokoshesa muunganidzi wemadhigirii ekoreji, uye zvishoma zvekugadzirisa matambudziko maniac.
Iye anoshanda sehunyanzvi murongi weMuseum yeArcheology yeCantabria (MAC). Mushure mekufa kwemwanakomana wake Gunnarr kuHondo yeKinsale (Ireland, 1602), Urko akapfuura nenguva yekudhakwa. Akave nenguva yakaoma kupora kubva kupindwa muropa uku. Inopfuura hafu yezviitiko munoverengeka zvinorondedzerwa naye mumunhu wekutanga, mumutsetse werangano unoitika munguva yazvino.
Zvisinei, nguva nenguva zviratidzo zvenguva dzekare (Prehistory kana nguva dzeScythian, semuenzaniso) zvinoratidzwa kuburikidza nendangariro dzevatambi kuti varondedzere zviitiko zvenguva dzekare. Pamusoro pe, Iago anogoverana basa remutambi mukuru nehama dzake uye naDana. Zvino, ndiye iye ane huremu hwakati wandei nekuda kwebasa rake rehutungamiriri mumhuri yekare.
Jaime del Castillo, ane zita chairo anonzi Nagorno (akaberekerwa muUkraine, zera: 2.700), ndiye mutariri wevashandi veMAC. Haana kumbobvira agadzikana nechinzvimbo chemukoma wake mukuru mumhuri yekare. Iye anochengetedza hupfumi hwake nekuda kwekubudirira kwemakambani ake. Hunhu hwake hwekupokana uye hunyanzvi hunomukwanirisa pamaonero ake echikadzi anodadira uyo anozvidza mhuri dzepfupi.
Kyra of the Castle
Ukuwo, Kyra del Castillo (Lyra) ndiye maneja weMAC Kudzoreredza Laborator. Mumakore aro ese angangoita mazana maviri nemazana mashanu, yakarasikirwa nevana vazhinji venguva pfupi, nekudaro, kuratidza iro jeni rinokonzeresa kurarama kwenguva refu chave chikonzero chikuru chekuvapo kwayo kuti isararame maronda ayo apfuura. Nehunhu hwakadzikama uye hwakachengetedzwa, anofungira zvakanyanya avo vakamupoteredza, kunze kweUrko.
Mukuvandudzwa kwechirongwa, kutaridzika kwaAdriana "Dana" Alameda Almerana ndiko kusarudza. Iye mudzidzi kubva kuSandander anova nyanzvi muPrehistory, uye anoshanda semusoro wekuchengetedza dhipatimendi reMAC's Prehistory. Iye mukadzi wechidiki akazvarwa muna 1980, anozivikanwa nekuomarara kwake uye yake inoshamisa karikhulamu iyo inosanganisira basa munzvimbo dzakakosha kwazvo muEurope.
Chinangwa chaDana chaicho ndechekujekesa izvo zvakakonzera kuzviuraya kwamai vake kwakaitika achiri mudiki. Kunyangwe pakutanga ichirovera musoro-nehunhu hwaIago, kukwezva kwakanyanya kunomuka pakati pezviviri izvo ivo vaviri vanoedza kupindirana kwenguva yakati ... kudzamara vazvipira uye vatanga hukama hwerudo.
Lür, "tateguru" (Héctor del Castillo) chizvarwa cheCueva del Castillo, kwaakaberekerwa makore anoda kusvika 28.000 XNUMX apfuura. Aigona kunzi "dhini wevanhu." Basa rayo rekutanga kuchengetedza kubatana kwemhuri yekare chero zvodii. Aine hushamwari uye akadzikama maitiro, iye anofarira kuverenga uye kufarira hove. Vatatu chete vezviuru zvevana vake vakagara nhaka geni yevechidiki vekusingaperi, chikonzero chesainzi? Ehe, hapana munhu akazvidudzira ... kusvika zvino.
Ruzivo irworwo rwuri pachena mune rondedzero dzekare runoratidza zvakanakisa zvinyorwa zvakambogadzirwa naEva García Sáenz. Kudzorera kunoshandawo kutsanangura izvo zvinokonzeresa kukakavara kwemhuri. Ivo vanowedzera inonakidza uye yakanyorovera mutinhimira kune anopfuura mazana manomwe mapeji e Iyo saga yeakagara-ararama: iyo yekare mhuri.
Kuongorora uye tsananguro yeVanakomana vaAdamu
Senge mubhuku rekutanga rezviteedzana, García Sáenz haasiye zvinongedzo zvisina kujairika kana kuwedzera mavara ekuzadza. Chidimbu chimwe nechimwe cheruzivo chakakodzera, iwo madhairekitori akagadziriswa nemamirimita emagetsi. Uye zvakare, munyori haana kuodza moyo vateveri vake kunyangwe paine tarisiro yakakwira kwazvo yakagadzirwa kubvira ipapo Mhuri yekare. Pakutanga, nyaya yacho inova yakasimba, kunyangwe paine chimiro chisina kujairika pakati paAdriana naIago, vanofungidzira ramangwana pamwechete.
Muchikamu chekutanga, protagonists vakasarudzika maitiro asina kujairika muma enzymes ane basa rekugadzira DNA telomeres (telomerases) yevana vaLür. sechikonzero chekusungwa kwekukwegura kwavo. Nekudaro, iyo telomerase inhibitor yakajowa muNagorno yakagadzira kare kupfuura zvaitarisirwa. Izvi zvinokonzeresa kuti moyo wake ushande senge wemakore zana ekuberekwa apo chimiro chake chinoramba chiri 30.
Panguva ino, shuwa Nagorno anosarudza kupamba Dana senzira yekumanikidza mukutsvaga mhinduro. (zvakakosha kuti ive mumazuva asingasviki makumi maviri nemana). Nekuda kweizvozvo, chikamu chemhuri yekare chinouya pamwechete zvakare. Izvi zvinosanganisira kushamisika kutaridzika kwemunhu anofungidzirwa kuti akafa mubhuku rekutanga.
Kuenzaniswa, en Vanakomana vaAdamu ruzivo rwe zvipenga kubva kare havana kupfuma zvakanyanya kana kutsigirwa - Kubva pamaonero esainzi- senge echikamu chekutanga. Asi, pasina kupokana, yakave yakawanikwa nenyaya inobata nyore nyore muverengi. Ndokunge, haina kurasikirwa nemwero wehunhu. Kushamisika kunoshanduka uye huwandu hwemufaro we Iyo saga yeakagara-ararama: iyo yekare mhuri.
Pachave nechikamu chechitatu cheiyo Saga yeiyo Yakagara-Kurarama?
Pamwe mubvunzo usingagadzirisike muvaverengi venhevedzano yese fananidzo yehuku nedambudziko rezai.: kana kuendesa anti anti kuchembera geni iwe unoda iyo yakagara-yakareba, yekutanga yakamuka sei? Vateveri vaGarcía Sáenz vakavimbika kwazvo vanotarisira kuti chakavanzika chichajekeswa zvizere muchikamu chechitatu.
Panyaya iyi, munyori weCantabrian akaudza mupepeti dossier we Iyo sphere yemabhuku: «Ini ndanyora yekuzvionera yega bhukuKunyangwe zita rekuti "saga" richitsausa, narwo ndanga ndichireva kune saga yemhuri. Kunyangwe paine zvimwe zvekuburitswa zveyakagara-nguva zvinoenderana nekuti zvinosvika kupi.
Kana ndikakwanisa kuwana yemhando nguva yekutarisana nekunyorwa kwerimwe bhuku zvakare -Yekutanga yakanditorera mwedzi makumi maviri nemanomwe uye ndakainyora husiku, ndapedza basa rangu kuUniversity uye zvimwe zvinoda mhuri kuti zviite-, pasina mubvunzo pachava nedzimwe nyaya kubva kune akareba akararama.
Makumi zviuru makumi maviri nesere ezviuru enhoroondo anoenda kure uye mavara akatorondedzerwaIwo akanyanya kuwanda uye akakura kwazvo zvekuti anozoshanda chero munhoroondo nhambo. Chero zvazvingaitika, ivo vaizogara vari ekuzvionera-ega-enganonyorwa; Semuverengi, handigoni kutsungirira kupedza makore akati wandei ndakamirira kuziva kuti nyaya inoguma sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iyo saga yeakareba-akararama naEva García Sáenz